नेपाल आज | माओवादीको शक्तिशाली पदमा ८ जनाको नजर, को बन्दैछ महासचिव ?
माओवादीको शक्तिशाली पदमा ८ जनाको नजर, को बन्दैछ महासचिव ?
बिहिबार, ०८ पुष २०७८ गते प्रकाशित - नेपाल आज
नेकपा (माओवादी केन्द्र) को राष्ट्रिय सम्मेलन पुस ११ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ। सम्मेलनले माओवादीको नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ। अध्यक्षमा दावी गर्ने दोस्रो ब्यक्ति हालसम्म तयार नभएका कारण पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै दोहोरिने सम्भवना प्रवल छ।
माओवादीको विधानले कुन–कुन पद बनाउँछ भन्ने अझै निश्चित नभएपनि कम्युनिष्ट पार्टीमा अध्यक्षपछिको शक्तिशाली पद मानिन्छ– महासचिव। महासिचवका लागि माओवादीमा तानातान चलिरहेको छ। वाहिर नदेखिएपनि आन्तरिक रुपमा विभिन्न कारण देखाएर प्रचण्डको उत्तराधिकारी आफू हुनु पर्ने दाबी नेताहरुले गरिनै रहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रमा अहिलेसम्म चार जनालाई प्रचण्डपछि शक्तिशाली मानिने भावी महासचिव पदको उम्मेदवारको रूपमा हेरिएको छ। पूर्वमहासचिव कृष्णबहादुर महरा, सङ्गठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्मा, पूर्वसचिव वर्षमान पुन र पम्फा भुसाल माओवादी महासचिवको प्रमुख दावेदार हुन । प्रमुख दावेदार रहेपनि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दाहालले कार्यकारी भूमिकामा साथ दिने सम्भावना कम छ।
यसैगरी, महरा यसअघि विवादमा आएका कारण उनलाई पनि महासचिव वनाउने सम्भावना न्युन छ। उनलाई उपाध्यक्ष बनाएर बाँकी तीन नेतामध्येबाट महासचिव चयन गर्ने प्रचण्डको तयारी हुनसक्ने पार्टीका नेताहरु वताउँछन्।
जन्डिसले थलिएर उपचारका लागि वैंकक पुगेका पुन अहिले चीनमा उपचाररत् छन्। उनी यही सम्मेलनका कारण स्वदेश फर्किने तयारी भईरहेको छ। पुन पार्टीमा यसअघि सचिव र शर्मा स्थायी समिति सदस्य मात्रै थिए। अध्यक्ष प्रचण्डले दुवै नेतालाई उत्तिकै महत्वका साथ जिम्मेवारी दिने गरेका छन्। उनीहरूले समान रूपमा संगठन र राजकीय जिम्मेवारी पाउँदै आएका छन्। यसअघि पुनलाई उर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो। शर्मालाई अहिले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर सरकारमा पठाइएको छ।
पछिल्लो समय शर्मा पार्टी संगठन विभाग प्रमुख छन्। पुन अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुख र केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्जको जिम्मेवारीमा छन्। पार्टीमा शर्मा र पुन दुवैले आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै लगेकाले चर्को प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। प्रतिस्पर्धाको अवस्था आए देशैभर शर्माभन्दा पुनको पकड बलियो छ। यद्यपी पछिल्लो समय पुनको स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि राजनीतिक रुपमा सक्रिय हुन नपाउँदा उनलाई क्षति पुगेको वताईन्छ।
यी दुईपछि उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल पनि महासचिवको दावेदार हुन ।स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङल र जनार्दन शर्मालगायत नेताहरूलाई मिलाएर सबै महिलाको प्रतिनिधित्वसमेत हुने गरी महासचिवमा दाबी गर्ने उनको योजना छ।
अहिले उनी सरकार र पार्टी दुवै कामलाई उत्तिकै महत्व दिएर सक्रिय भइरहेकी छन्।
यसअघि पार्टी सचिव भइसकेका स्थायी समिति सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेत पनि महासचिवका लागि सम्भावित उम्मेदवार हुन । उनी पार्टीको वन तथा वातावरण विभाग प्रमुख र कर्णाली प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीमा छन्।
नेता नारायणकाजी श्रेष्ठनिकट गिरिराजमणि पोखरेलले पनि महासचिवमा दाबी गर्नसक्ने नेताहरु वताउँछन् । यसअघि नै सचिव भइसकेकाले पनि उनले महासचिवमा दावी गर्नु स्वभाविक हुने उनीनिकट नेताहरुको भनाई छ।
स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलसमेत महासचिवमा दाबी गर्ने योजनामा छन्। यसअघि पार्टी कोषाध्यक्ष रहेका उनी महासचिव नपाए उपाध्यक्ष हुने तयारीमा रहेको वताईन्छ।
काठमाण्डौंको प्रज्ञाभवनमा १,५०० प्रतिनिधिको उपस्थितिमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनले यसअघि जस्तै अध्यक्ष मात्रै चयन गरेर बाँकी पदाधिकारी चयन थाती राख्न सक्ने आँकल पनि गरिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र महासचिव